Komishanka doorashooyinka Kenya oo diyaar u ah doorashooyinka Isniinta - Sabahionline.com
Komishanka doorashooyinka Kenya oo diyaar u ah doorashooyinka Isniinta
Komishanka Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Soohdimaha (IEBC) ayaa sheegay in agabkii doorashada uu diyaar noqon doono Axadda (3-da Maarso), ka hor doorashoyinka guud ee Isniinta.
Koox madax-bannaan oo Kenyan oo sameeynaysa qiimeeyn baddiil ah oo lagu sameeyo doorashooyinka
Komishanka doorashooyinka Kenya oo dib u dhigay doorashadii tijaabada ahayd
Odinga oo ka dhiidhiyay natiijadii doorashada
Inta badan agabka codeynta waxa goobaha la gaarsiiyay intii lagu jiray fasaxa todobaadka, kuwa aan wali la geeynna waxa la geeyn doona duhurnimada Axadda, ayuu yiri Madaxa Maamulka Sare ee IEBC-da James Oswego, sida ay sheegtay Capital FM-ta Kenya.
Oswago ayaa sheegay in saxaafaddu ay galaangal u yeelan doonto natiijada goobaha cod-bixinta. Xogta codeeynta ee laga oo aruuriyay daafaha dalka ayaa waxa lagu soo diri doonaa khadka taleefanka gacanta iyada oo loo soo diri doono xarunta lagu kala gurayo ee Nairobi si loo tiriyo, iyada oo ay jiraan saddex heer oo lagu hubinayo natiijada ka soo baxda gobollada, ayuu yiri.
Tallaabooyinka ammaanka ayaa sidoo kale kor loo qaaday Gobolka Waqooyiga Rift, sida uu sheegay Guddoomiyaha Degmada Galbeedka Eldoret Christopher Wanjau. "Ma hayno tirada rasmiga ah ee askarta ammaanka laakiin waxan doonaynaa in aan dadweynaha u xaqiijinno in ammaankoodu uu sugan yahay," ayuu yiri.
Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray Jimcihii ku sheegay in ay sidoo kale guud ahaan dalka ku diyaariyeen tallaabooyin bini'aadannimo iyo jaangooyooyin gurmad.